Uhlelo lokusebenza lokususa umsindo kwikhamera ye-Galaxy S5 | Izindaba zamagajethi
Ngenkathi ku-opharetha abathile baseMelika kukhona inketho yokususa umsindo wekhamera kwi-Galaxy S5Ezinguqulweni eziningi zale foni enhle uzothola ukuthi akunakwenzeka nje. Ukuba nokukhetha enye indlela yokukwazi ukuthulisa umsindo we-shutter wekhamera, ngoba ngezikhathi ezithile umsindo owenzayo ungacasula kakhulu lapho singaba semidlalo yaseshashalazini noma embukisweni lapho ukuthula kungumthetho khona.
Kuyamangaza futhi ukuthi ocingweni oluphakeme olusezingeni eliphezulu njenge-Samsung Galaxy S5 inkinobho yokuvala umsindo we-trigger yekhamera ayikho kuzo zonke izinhlobo zayo, ucabanga ukuthi bazoba nezizathu zokungayifaki njengejwayelekile . Ngokulandelayo sizokukhombisa enye yezindlela zokuthula ngokuphelele lokhu kusebenza ukuze ukwazi ukuthatha izithombe ezinhle uthule ngaphandle kokuphazamisa noma ngubani.
Ukuze ukwazi ukwenza izithombe ngaphandle komsindo wokudubula ikhamera Sizodinga ukufaka uhlelo lokusebenza ku-Galaxy S5 ezobhekana nokuyithulisa ngokuphelele.
La uhlelo lokusebenza lubizwa ngokuthi yi-Enforced Stream Silencer futhi kuzofanele uyilande kusuka kulesi sixhumanisi ngoba ayitholakali ku-Google Play Isitolo. Uyifaka bese uzama ukuthatha izithombe eziningana ukuze ubone ukuthi ayisenzi kanjani umsindo wokudubula wekhamera ocasulayo kwesinye isikhathi. Ukuze ufake uhlelo lokusebenza, kuzofanela wenze kusebenze inketho yokuyifaka kusuka ku- "Imithombo engaziwa" kuzilungiselelo.
uhlelo lokusebenza okungathathi lutho ngaphandle kwe-15kb Futhi ungakhipha uma kwenzeka ufuna ukuba nomsindo wekhamera uphinde udutshulwe kwi-smartphone yakho ye-Galaxy S5.
Kukukhumbuze ukuthi ungasebenzisa le APK ukwenza thulisa i-shutter kwamanye ama-smartphones e-Android, ngoba kuyinketho abakhiqizi abavame ukungayinaki.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungawususa kanjani umsindo wekhamera kusuka ku-Samsung Galaxy S5
Sawubona, ngiyabonga ngalesi sihloko, kube kuhle kakhulu kimi.
Phawula ukuthi ngikhiphe uhlelo lokusebenza futhi ikhamera ayikazwakali. Mhlawumbe lapho ngiwucisha futhi ngiwuvula, lowo msebenzi usethwe kabusha, kepha okwamanje konke kulungile.
Ngiyabonga kakhulu ngalo mnikelo, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu, manje sengingasusa lowomsindo ocasulayo kwikhamera ngaphandle kokuthi ngithule s5. Ngiyabonga.
Yeka umkhonyovu, lokhu akusebenzi !!!!!!
Isebenza kahle ku-S6 nge-lollipop 5.1.1.
Isicelo esihle kakhulu !!! Kungisebenzele kahle, ku-Samsung Galaxy A5… Ngiyayincoma, bangani, kusebenza kahle! Ngibonga kakhulu…
Sawubona. Ngilufakile uhlelo lokusebenza futhi lusebenze kahle kakhulu kepha manje njengoba sengilikhiphile ikhamera ayikabi nawo umsindo. Ngingayixazulula kanjani?
Isebenza kahle kakhulu .. I batusa uhlelo lokusebenza .. it neze kuthatha isikhala?
[E3 2014] Isifinyezo senkomfa yeMicrosoft